Famintinana - miverina
Ny Psychosaurus dia mampiditra ny tenany:
Mihevitra poety aho ary tsy lasa niharan'izany olondantitra izany. Ireo mpankafy extraterrestrial ireo dia mandehandeha tsy ara-dalàna amin'ny habaka ao anaty haizina ary mitsentsitra ny sain'ireo matory avy ao anaty ati-doha miaraka amin'ireo lava-paty. Tsy sahy mampiasa teny efa notononin'ny hafa teo am-bavany ny hafa. Hitako fa tsy voavono io. Izany no mahatonga ahy matetika mamorona teny vaovao, izay miteraka ny olana izay tsy misy mahafantatra ahy intsony. Vokatr'izany, tsy maintsy nampiasa teny taloha aho fa ny alemà vernacular dia tsy niforona fotsiny. Mety hiteny ny fiteny satria izy io no ahitana ny sarin'ny fisian'izy ireo. Ny fiteny indrindra dia ny momba ny fanomezana trano ho an'ny sarin'izao tontolo izao. Mampalahelo fa rehefa misy olona manaraka ny tenin'ny fitenenana dia avy eo mandray azy ireo.Ny tena fisainana dia mamolavola fiteny. Ny fiteny no I of a Psychosaurus, izy no ivony. Izao tontolo izao dia tena miaina amin'ny fiainana amin'ny fiteny amin'ny fiteny, satria ny fitenenana dia midika: famoronana izao tontolo izao. Tany am-boalohany no teny ny teny!
Vola: Lazao Psychosaurus, inona ity boky ity
raha ny marina?
Psychosaurus: Ao amin'ity boky ity no miteny ny fitenin'ny fiteny ary avy eo
Ny resaka rehetra momba ny fiteny dia misy lohahevitra rehetra.
Ente: Aleo ananana fanontaniana manokana: Inona ny maha samihafa
ny Psychosaurus sy ny Carsten?
Psychosaurus: Tsy te hiresaka momba izany aho, mavesatra ny lohahevitra
izaho dia tanteraka.
Duck: efa sitrana ry zalahy a!
Vola: Mazava ho azy fa iray ihany io boky io
fandikan-teny ho azy!
Psychosaurus: Izany dia.
Mampitombo ny hafahafa amin'ny fomba tsy takatry ny saina izany.
Ny fiteny dia miteny mihoatra ny arivo ny fiteny.
Kichermaus: Raha te hanoratra amin'i Carsten aho dia manana azy koa
amin'ny Internet na zavatra?
Psychosaurus: Amin'izao fotoana izao dia manana ny adiresy mailaka izy
carsten-stemm@web.de ary manana an-tserasera koa izy.
Giggle: Tsy azoko ny teny iray, na dia ny gara aza.
Rabe: Tsy mila azonao ny zava-drehetra. Indraindray dia ampy manalavitra azy
avelao ny teny hitondra anao mandritra ny tsy mampino.
Rindran-droa avo roa heny
Detlef Doppeldoid dia tsy afaka mieritreritra tsara amin'ny andaniny roa amin'ny ati-doha. Mieritreritra haingana kokoa noho ny mazava i Detlef, izay mitarika amin'ny fidobohan'ny fotoana eny amin'ny sehatry ny logosogaly. Avy eo dia nivily miankavia sy ankavia, hivoahana, ary harato amin'ny harato. Tsy fantany na miditra amin'ny efitrano iray ianao. Ratsy momba an'i Detlef Doppeldoid: tamin'ny andro iray izay niheverany fa olona ny olona. Detlef dia tsy mahatadidy ny fahasamihafana eo amin'i Albert Einstein sy Konrad Adenauer. Detlef manontany tena hoe: 'mitovy ny' 'mitovy' 'ary' 'mitovy' '? Indraindray Andriamatoa Doppeldoid dia manao hadisoana amin'ny fomba ety anaty koa. Raha very hevitra tanteraka izy, dia tadidin'i Detlef mihitsy aza ny ho avy.
Detlef dia miteny:
'' Isaky ny tsy fantatro intsony hoe iza aho, dia mijery ny karatra maha-izaho ahy: manana ny laharana misy ahy aho; ho ahy manokana, ho ahy manokana. Hafahafa sy tsy azo ihodivirana. Tia ahy ny fanjakana. Izany ve no mahatonga ahy hatraiza hatraiza? Iza no ao ambadiky ny anarana hoe Detlef Doppeldoid? Ary inona no manaporofo ny carte plastika kely toy izany? Ny karatra plastika dia mora vita. Azonao atao ny mamitaka zavatra ankehitriny. Azonao atao mihitsy aza ny mamorona na iray. Marary be ra aho. ''
Ny bitro izay mahay miteny dia antsoina hoe bitro miresaka. Ny bunie miresaka dia mihinana raha miresaka sy miresaka ary mitsabaka. Tsy fantatra aminy ny fakany teny. Manam-pitiavana izy izao. Ny fitiavana dia teny iray aminy fotsiny, munch, munch. Afaka mihinana fitiavana ny olona iray raha tsy misakafo, fa fahendrena ny miresaka bitro.
Ny biolojista dia liana amin'ny volom-bolo amin'ny alikadia, ny Ontologist dia liana amin'ny maha tompon-doka ireo. Iza no manome ireo dody? Valiny: Ny 'It'. 'Izy io' ary manome be dia be. Afaka mamaly ny fanontaniana toy izao manaraka izao ny olona iray: Evolisiona manome taraza, atody ny atody manome daka, ny firaisana fanaovana firaisana manome ducks, omen'Andriamanitra ny alika. Avy ny orana. Raha ny marina, tokony hisy ny milaza hoe: avy ny orana Na Andriamanitra aza tsy ao amin'io 'izany', satria hoy izy: misy Andriamanitra. Izany kosa dia midika hoe: ny 'it' dia lehibe noho Andriamanitra. Fanapahan-kevitra iray hafa dia ny: Ilay 'It' io no tena Andriamanitra izay omen'Andriamanitra voalohany. Ao ny ducks. Tsy milaza ianao hoe: ducks. Sambatra noho ny mandray ny fanomezana. Ny fanomezana dia mety ho ontological ihany koa noho ny mandray. The 'it'tsy mazava dia tsy hitanao intsony ny zavona azy. Ny vokatra: tsy mba mieritreritra akory ny tena fiavian'ny dera ianao. Mamitaka ny ‘it’ azy. Mahafantatra izany. Raha tsy fantatsika intsony fa orana ny rahona, dia avy ny orana. Ny negation koa manome ny 'it': '' Tsy misy izany Elwetritsche! '' Iza no afaka manao an'io 'it' io afaka manome an'ireny doka ireny?Tsy misy zavatra hafa toa an'i Elwetritsche! '' Iza no afaka an'ity 'itsy' izay afaka manome an'ingahy tsy Dada ireo?Tsy misy zavatra hafa toa an'i Elwetritsche! '' Iza no afaka an'ity 'itsy' izay afaka manome an'ingahy tsy Dada ireo?
Goldmarie sy Pechmarie
Indray mandeha dia nisy mpandahateny nanosika izay nanana zanakavavy roa, samy manana ny anarany roa izy. Niasa mafy ny iray, ny iray kamo kamo. Indray andro dia tonga tao amin'ny loharano iray ilay vehivavy mazoto izay niteny hoe:
'' Tsy misotro rano! ''
'' Tsy misy antony ara-dalàna ihany ', hoy ny eritreritr'ilay vehivavy nangetaheta. Nisotro rano ilay tovovavy ary tsy nahy tao anaty lavadrano, ary tsy nahatsiaro tena intsony izy. Indraindray dia nifoha indray tao amin'ny faritra iray tsy mbola fantatra taminy.
Nisy vehivavy antitra iray nijanona teo am-baravarankely iray trano nila fanavaozana ary nanakombona ny ondana. Frau Holle, izay anaran'ilay mpanofa, dia nilaza tamin'ilay zazavavy hoe: '' Ireo mpitaiza zokiolona toa anao dia tsy fahita firy tato ato, be dia be aho miasa. '' Ary satria ny vehivavy miasa mafy dia maniry mafy ny miasa, dia nanao ny trano ho an'i Frau Holle izy.
Rehefa afaka kelikely, dia lasa sahirana ny tovovavy ary naniry ny hiverina hody. Frau Holle no nanome an'io fangatahana io. Ilay vehivavy taloha dia nitarika ilay tovovavy ho any amin'ny vavahady iray izay tokony halehany. Raha nandeha namakivaky ny vavahady ilay vehivavy mazoto, nandatsaka orana avy teny ambony avy tamin'ny feta misy zezika izay tsy niposaka intsony ny hodiny. Hoy ilay tovovavy: '' Tratran'ny omby! Hamaly faty aho. Mianatra matematika aho ary manao ny mari-pahaizana momba ny teôlôjia mifanentana. ''
Raha nahita ilay zanany nivelezina tamin'ny kofehy ilay renim-pianakaviana dia nataony hoe Pechmarie ny zanany. Noho ny antony ara-tsosialy ara-tsosialy dia nandefa ny zanany vavy maloto tao amin'ny lava-drano ihany koa ny renim-pianakaviana. Saika izany no nitranga. Fa raha tokony handeha tany Frau Holle, ny zanany vavy faharoa dia tonga tany amin'ny trano hafa iray nipetrahan'i Frau Helle.
Rehefa avy niasa folo minitra ny asa, dia niharatsy be ny fifehezana asa nataon'ny zazavavy kamo. Hoy Andriamatoa Hell: "'Tamin'ny taonanao dia saro-kenatra ihany koa aho. Tsy manana diplaoma ambaratonga faharoa aho. Mihazakazaka mankany amin'ny Château Mouton-Rothschild 1945 isika izao, izay ny vinantolahiko no nangalatra ny tenany.
Soa ihany fa feno azy ny kianja iray manontolo. '' Taorian'ny herintaona feno habibiana amin'ny fisotroana, ny kamo kosa dia nody trano ary naniry ny handao trano. Frau Hölle dia nitarika azy ireo ho any amin'ilay vavahady mitovy nandalovan'i Pechmarie. Raha nandalo teo am-bavahady ilay tovovavy kamo, dia nandatsaka volamena taminy. Ankehitriny ilay tovovavy dia tena sarobidy satria tsy azo esorina ilay volamena. Rehefa tonga tany an-trano izy, dia nantsoin'ny reniny hoe Goldmarie. Noho ny hatezerana be noho ny tsy rariny amin'ny fiainana dia noroahin'ilay renim-piangonana ny fiangonana ary nandeha fitsarana manokana izy. I Pechmarie dia lasa mpampianatra ny lojika voalohany tamin'ny alàlan'ny setroka vita amin'ny dioksina. Voasakembana tanteraka ny ain'izy ireo. Goldmarie kosa na izany aza dia niaina sambatra sy afa-po mandra-pahafatiny. > Fiafarana sambatra
Mpiandry: Lazao ahy, inona ilay boky itondranao eo ambanin'ny sandrinao?
Wolfgang: Ny iray amin'ireo ondrinao nanome ahy ny boky ho an'ny tsingerintaona nahaterahako. Ity lohateny ity dia: Ataovy ho an'ny tenanao ny fromazy!
Mpiandry: natao vazivazy ve izany?
Wolfgang: Ny vazivazy dia tsy tokony hohamaivanina. Tsy vazivazy mihintsy aho Izay vazivazy dia diso adala be fotsiny hoe ratsy be. Tsy nanao vazivazy mihitsy aho. Ary raha misy mihomehy, dia nokasihiko izany vava izany.
Ondrilahy: Azafady, raha manelingelina aho fa misy fanovana miovaova, ka afaka miteny aho. Mbola misy ve ny hetra vaovao amin'ny fromazy ho avy tsy ho ela?
Ondrilahy iray: Izaho koa dia vokatra vita amin'ny motika voaforon'ny Mpamorona, ary lazaiko aminao: Ny lehilahy dia toy ny vehivavy, ary ny lafiny iray hafa ihany.
Wolfgang: Nihevitra foana aho fa dia ny fomba hafa manodidina!
Mpiandry: Mihetsi-po foana aho amin'ny resaka sarotra. .. Ah, jereo izay ho avy! Malahelo izy!
Wolfgang: Vita fampitahana ihany izany!
Mpiandry: Nahoana izany?
Wolfgang: Satria hoy ny olona iray: Ny fitoviana rehetra dia lentika!
ondrilahy voahosotra: ny dikany dia tsy afa-mihetsika foana. Noho izany dia nampanantena haingana ny teniny ny mpandahateny. Ny Alemanina avo roa dia ny Lapsus Freudianikus, ny leaks ao amin'ny fampisehoana tsara an-tsehatra.
Wolfgang: Karazan-dresaka inona izany?
Mpiandry: Nandinika ny ondriny. Psycholinguistic na zavatra iray.
(Efa tonga tao amin'ny vondrona fifampidinihana ilay lehilahy malemy.)
Zavamaniry: Manaraka ahy izy ireo. Ny varotra nataoko nangalatra
Ny plutonium avy amin'ny zavamaniry nokleary Rosiana dia notsofina!
Mpiandry: Aza manao na inona na inona, Otto!
Ondry: azonao atao ny mihinana plutonium?
Mpiandry: Tsy ny ondry rehetra no nianatra!
tafangona daholo ny ondry: Mähhhh!
Otto: fomba tokana ihany no haiko: famonoan-tena!
Wolfgang: Manana fomba hafa ivoahana aho. Fantatro mpanadino mahay amin'ny faribolana. Mijaly amin'ny alika iray izy, saingy ara-teknika dia tsy maninona izy.
Otto: Iza io mpanao ody io?
Wolfgang: Izy rehetra no heverinao ho misy azy, satria be dia be izy
Ny planeta amin'ny trano fahafito, ao anatin'izany i Pluto.
Otto: Tsy mino ny fanandroana aho!
Wolfgang: Fa ny kintana dia mino anao!
Otto: Tsara izany, te hiezaka aho, satria tsy manana zavatra tsy ho very intsony aho. Mamela ny tenako ho lasa bitro aho ary soratako aoriana ny anarako mba tsy hisy hahalala ahy.
Mpiandry: Zavatra tsara! Ankehitriny dia faran'izay sambatra izay!
Amin'ny fotoan'ny filana dia mihinana voanjo ny paoma.
Monkey: hariva be, malai-maso, manana maso miloloha ianao.
Halelo-maso: Ary gidro ianao ianao, ianao gidro.
Monkey: manana sangan'asan'ny dinamita aho eto.
Iza no hikipihintsika ny ampondra?
Oblique Eyes: Mazava ho azy! Tsy milaza aho hoe tsia ny TNT!
Ry gidro mamirapiratra, mendrika ny loka Nobel ianao!
(Ny gidro dia misaron-doha ilay dinamita ary mamelona ny fitombenana. Taorian'ny fiandrasana segondra, dia misy fandringanana mahery setra: vovoka, poti-javatra ary sisa tavela amin'ny hena manarona ny toerana fipoahana.)
Monkey: tsara! Nianjera!
Ho antsika biby dia tsy misy isa na paragrafy.
Ankehitriny dia akondro aloha no andrasana aloha. Haha!
Indray mandeha dia nisy fiara squeaky kely izay mandeha amin'ny maotina sy malefaka. Mandroso ny sariety, tarihin'ilay soavaly ilay izy. Fiara tsy mitondra fiara ankehitriny. Rehefa nanomboka natosiky ny masera ireo fiara, nivadika ho vy ny sariety, raha mbola voaray ny sarety, dia namony ny voninkazo ary nirohotra niaraka taminy ny rano. Niaina tao amin'ny kodiarana milina ny tsiambaratelon'ny fiainana, tao anaty rano ilay kodiarana. Ny fiara vaventy nateraky ny tovovavy vy. Ny lanitra manenjana, ny lanitra manenjana, mampientanentana izany. Nitsambikina tany an-danitra i Stahltussi nisy tafio fiarovan-tena. Ady eran-tany I, ezaka tsy misy dikany raha tsy lasa soavaly indray. Estera soavaly i Stahlbussi izao, ka izay no mahatonga azy manao soavaly. Ny kalesy dia tena kanto,toy ny hatsaran-tarehy dia tsy fantatra intsony amin'ny vanim-potoanan'ny vy. Ny vy koa ny plastika. Izay vy tsy taratry ny soavaly dia vy. Mahatalanjona ny hatsaran-tarehy ianao izay tsy saribakolin'ny lamaody.
Sehatra bebe kokoa
Efitrano tokana lehibe dia efitrano lehibe kokoa noho ny ivelany. Ny kaopy fitambaran-tsasatra maromaro, ohatra, dia toy ny kaomina amin'ny efitrano fatoriana mahazatra. Fa raha tsy maintsy manafina ao amin'ny efitrano fidiovana ianao raha ilaina izany, dia ho gaga ianao hahita fa misy galaxie feno ao amin'ny lemaly. Ary tsy fanalam-pomba izany vokatry ny tsy fisian'ny oxygen. Ny lavaka dia feno lavaka. Ary mbola betsaka ihany koa.
Mandrahona anao ny loza. Mbola tsy tonga ny loza. Saingy mety handratra amin'ny ho avy izy io; mampidi-doza izany. Tsy milamina ny fiainana. Tsy fantatrao na ho simba ny fiainana amin'ny fotoana manaraka. Manodidina ny lafiny manodidina ny loza, loza tsy ampoizina, mety hivadika ho nofy ratsy. Mampidi-doza ny mpanendaka; Ireo kapitalista koa. Mampidi-doza ny mametraka tariby herinaratra ao anaty dobo feno rano. Mampidi-doza ihany koa ny fanambadiana. Ny fiantohana fiainana kosa, amin'ny lafiny iray, dia manome toky ny fiarovana: raha toa ka maty ianao, ho valin'izay ahazoanao vola vaovao. Saingy mitandrema amin'ny fisolokiana amin'ny fiantohana: Manararaotra anao ny orinasa fiantohana!
Nirenireny tany amin'ny tany misy dikany. Ny lalan'ny fisainana dia mihazakazaka mankany amin'ny alan'ny fahalalana. Mahatonga sain-doha ny fisolokiana ary mifangaro amin'ireo hazo fisainany sy ny oram-panala nofinofisiny.
Fred dia mahita andriamanitra ao amin'ny Olympus misy telefaona finday:
Fred: Salama, Andriamanitra!
Hatramin'ny oviana no nampiasa telefaona finday ireo andriamanitra?
Andriamanitra: Eny, mifanaraka fotsiny ianao. Afaka nifampiresaka tamin'ny telepatiôta niaraka tamin'ny mpiara-miasa tamiko aho, nefa Andriamanitra dia te hampahafantatra anay ny olona.
Fred: Tsy azoko izany!
Ny volon-tsiram-bolo dia ny bitro amin'ny fampihenana ny pneumistic. Antsoina koa hoe loha atody. Ny neurolanten-nareo tsy mora zahana, fa efa tena ela. Ny vary masaka dia tokony hipetaka amin'ny lohan'izy ireo, satria misy tavy be dia be ao aminy. Neurolanten no tsorakazon'ny sainy. Neurolanten dia mety ho vongan-javaky ny hazo izay tsy ahitanao intsony ny ala noho ireo rehetra ireo. Fa ny tena neurolantsana no akoho amin'ny fihinanana sushi ara-panahy.
Ny mpitsoka atidoha sasany dia antsoina hoe filozofa. Mihevitra ny filozofia raha tsy misotro ara-panahy, maivana tsy misy fitiavana. Any an-tany efitry ny fahalalana no mety vazivazy ratsy. Cacti tsy mihomehy akory. Ny eritreritry ny filozofia dia mafy toy ny fromazy taloha. Philosophers eo an-dàlana mankany amin'ny fanasitranana dia manomboka manoratra tononkalo.
Fred: Fantatrao ny atao hoe Detlef, nampirongatra ho demigod aho.
Fred: Izany! Afaka mahita valiny amin'ny fanontaniana rehetra aho izao, raha tsy diso, fa ho hitako ny valiny.
Detlef: Iza no nampandroso anao?
Fred: Ilay lehibe!
Fred: demigod fotsiny aho. Mbola tsy mety maty aho izao, fa miasa izany.
Detlef: Mm, ataovy izany.
Fred: Fantatra, ohatra, ny antony nahatonga ny fody akondro.
Detlef: Ie, nahoana?
Fred: Maniry ny firaisana izy, maniry ny hiverina ny paradisa, te-ho faribolana, te-ho faribolana, saingy ny fahalavoan'olombelona dia mandrara azy hanao izany, ny heriny dia mahatratra hatramin'ny farany.
Detlef: Inona ny fantatry ny demigod!
Ny teny hoe '`matoatoa' dia teny manirery. Tsy maintsy manazava be dia be ny teny. Ny faharanitan-tsaina dia manorotoro vato; mifandray ny saina. Ny Fanahy dia manazava ny faritra eto amin'izao tontolo izao toy ny masoandro ary manome endrika azy ireo. Ny saina dia sary ho an'ny zavatra. Manamory ny singa kely faran'izay bitika ny fanahy. Afaka mieritreritra ny saina, ny saina ihany no afaka mieritreritra na mitambatra.
ny antony sy ny vokatr'izany
Mpilalao mpanao billiard mikapoka baolina iray amin'ny tsato-bolany, ary avy eo dia mamely baolina iray hafa. Ny fisainana sy ny fiantraikany miteraka io no lojika lojika. Ny lojika ihany no mametraka, tsy manazava na inona na inona. Ny safidin'ny maimaim-poana an'ny mpilalao billiard dia afenina tanteraka amin'ity fomba fijery eto an-tany ity. Ny antony dia biby malemy, saika omby. Miteraka resy lahatra amin'ny alàlan'ny angovo, fa tsy amin'ny dikany.
Fred: Mino ny lojika aho. Ny cosmos manontolo dia mirindra ara-lojika. Na izany aza, ny vehivavy dia tsy ampahany amin'ny cosmos. Ny fisainana lojika dia ahafahanao mihazo nuton'ny piozila. Mila miezaka mafy amin'ny fisainana fotsiny ianao.
Arnold Heitermann: Ny lojika dia tsy mahazo fahalalana intsony isika. Ohatra: Misy ny goaika telo mipetraka amin'ny fefy iray. Ny mpamono vorona dia avy eo ary mitifitra ny iray amin'ireo vorona.
Arnold: firy ny vorona mbola mipetraka eo amin'ny fefy izao?
Fred: Mbola misy goazy roa mipetraka eo amin'ny fefy.
Arnold: Diso! Mbola misy zohy mipetraka eo amin'ny fefy!
Fred: Tsy mitombina tanteraka izany!
Arnold: Azo lojika izany. Maty tsy tra-drano ilay vorona voatifitra. Ny taim-piangonana faharoa dia tora-kovitra mafy ary avy hatrany dia nandositra. Ny daroka fahatelo dia nalemyhaka an'ny bang ary izany irery no hany vorona mipetraka.
Fred: Toa tsy nampoizina ahy ity raharaha ity fa mitombina ihany izany.
Arnold: Eny, ny lojika dia afaka manazava ny zava-drehetra ary tsy misy dikany.
Fred: indrindra amin'ny tsy fahitana.
Arnold: Eny, aorian'izay.
Ny zava-misy dia nisy teo aloha ihany.
Fred: Ahoana raha rehefa nisy tifitra tampoka dia nisy goa dimy nipetraka teo amin'ny fefy?
Arnold: Avy eo, nisy goaika namono tena roa dia hipetraka nanantena ny ho voatifitra ihany koa.
Fred: Tena tsara izay lojika.
Arnold: Azonao atao ny manazava ny zava-drehetra amin'ny lojika, na dia tsy mahay mandanjalanja aza.
Fred: Lehilahy, lehilahy, mila mieritreritra an'izany aho.
Arnold: Nefa avelao hijanona ho lojika tanteraka!
Fred: Eh… yeah… tsara…
Socrates: Manao ahoana ny fahitana anao androany maraina, Plato!
Plato: Fandrao, ry ass!
Socrates: Tsy afaka mifampiresaka tsotra izao ianao!
Ny bala iray dia noforonina mafy ho azy: Te hiteraka raha tsy niraharaha. Saingy tsy misy mahalala azy ireo. Ny baolina dia mijanona ho malemilemy toy ny fotaka ary tsy mifankahalala. Maninona no mihodina fotsiny ny baolina? Mihodina amin'ny lalana izy ireo, saingy tsy manova ny endriny ao anatin'ny dingana. Amin'ny farany, dia hihodina amin'ny hetsika izy ireo. Mijanona eo amin'ny sehatry ny habakabaka. Ankehitriny dia mitranga amiko indray: vehivavy ny bala!
(un) tonga lafatra
Ny alika dia ny hevitry ny alika. Ny hevitry ny amboa ve toa hoe dachshund, volon-java-bolamena, volon'ondry, na vorona aza? Fantatsika ny atao hoe faribolana iray. Misy boribory tokana ary boribory tanteraka. Na dia misy lafiny telo aza dia lasa sarotra kokoa: Inona ny zoro manao ny heviny ny triangle? Ny faribolana dia ny hevitra tokana afaka mahasarika amin'ny fahitsiana. Tsy afaka ny ho voasarika ilay alika, fa alika voafaritra ihany. Azo faritana ilay boribory. Hivavaka amin'ny faribolana ve isika? Misy “ao aminy” ve? Zavatra misongadina ihany no hiseho ho ahy "? - Ny tonga lafatra amin'ny zava-misy dia tsy lavorary loatra amin'ny fiainana. Mila zoro amin'ny faribolana iray na lavaka amin'ny kianja iray ny fiainana. Ny lavorary dia misy raha ny hevitra iraysatria raha ny marina dia tsy misy ny tonga lafatra. Amin'ny fahatsaran'ny fiainana dia manana zoro ny faribolana. Ny kazatra dia balona mitodika. Vokatra ao amin'ny fahatanterahana tsy lavorary toy ny fiainana tonga lafatra. Na izany aza, ny tratran'ny aretin-kibo dia somary marary. Nahoana? Ny landihazo ihany no mahalala an'izany!
Tsy afaka miaina ny faribolana iray. Tsy manana na inona na inona izy raha avy miaina. Ilay faribolana dia azo jerena toy ny loaka. Moa ve ny vavahady mitodika mankany amin'ny tontolo hafa? Tsy azoko jerena intsony izany satria tsy avelako hiditra ao anaty faribolana. Lany lakana fotsiny izao. Tsy tokony hikorontana amin'ny toa izany ianao. Tsy miresaka amiko ny faribolana, hijanona ho mistery foana izany. Ilay faribolana dia mety tsy manana zavatra afenina azy: mahakomotra, mankaleo ary tsy misy ilana azy. - Ny boribory dia ny lokon'ny faribolana. Tena tsy fahita io loko io ary tsy misy anarana. Ny fomba tsotra indrindra hanomezana ny loko dia ny `` maro loko ''. Ny fihodinana dia afaka mandeha amin'ny fizaram-paritany tsy misy faribolana na arc. Ny zava-niainana iray dia ny fiainana. Fa antitra ny fihodinanafa ny fisainany vaovao dia tsy hiteraka hadalana mihitsy. Na izany aza, ny philistines dia tsy mikorontana mihitsy amin'ny orinasa. Mafana loatra izany. Te ho lasa faribolana ny fihodinana ary nangataka ny maso ivoho asa. Kianja ilay mpitily. Lasa ratsy iny.
Mihevitra ny paoma ary ireo mpanamory ny voahangy.
Mahagaga ny fikapohana
Hit no voambolana manerantany izay misy. Tena tsara tokoa ny fikapohana. Ity hetsika ity dia efa novolavolaina tanteraka tamin'ny vanim-potoana tamin'ny vato. Azonao atao ny manokatra ny masonao, boky iray koa. Jereo ny rakibolana, mametaka ny varavarankely na mamely olona amin'ny tarehy. Mitabataba ny amponga. Manohina anao ny daroka. Ny meniscus 1st FC dia nandresy ny tongotra mamba Rosenheim 2: 1. Izay mandresy dia mandresy. Ny fomba tsara indrindra namely dia misy amin'ny vato. Vato tsara antsoina hoe voninkazo. Matetika sy tsy matihanina ny kapoka ao aminy. Ny tsofoka iray dia tsy mahatsiaro ary atomika. Manapotika kapoka, manapotika, mametaka manasaraka. Ankizy mikapoka kosa antsoina hoe fanapahana. Zanaka ratsy. Ny zaza iray hafa amin'ny fikapohana dia antsoina hoe manosika. Io ankizy io dia mora kokoafa mbola misy masoandro io any aoriana. Mametraka kofehy ny fikoloana, manome izay kibo izy.
Ny harena dia ny fametrahana ny traikefa farany an'ny olona rehetra. Ao ny traikefa voamarina fa voamarina toy ny firaketana harena. Tahaka ny sahan'andriamby, ny harena dia nahary ny olombelona rehetra avy amin'ny lafiny ara-panahy. Ny Werkschatz no Wikipedia voajanahary iainana. Mampalahelo fa misy koa ny ondry mainty ao amin'ny fitrandrahana harena: antsoina hoe Werkschmutz.
Ho an'ny Mpanjaka Orthos, ny fanapahana dia midika hoe mamela ny zavatra voalamina araka ny maha izy azy manokana. Tsy namindra ny sitrapony tamin'ny vahoaka i Orthos. Tsy te hanery zavatra ny mpanjaka fa kosa izy dia nanadihady ny maha-izy azy ary namela azy ireo hikarakara ny tenany. Mipetraka any amin'ny fanjakan'i Ortho ny olona, ​​osy ary zavaboary hafa, samy mijoro ary mandeha amin'ny toerana mety aminy. Taorian'ny nahafatesany, i King Orthos dia ho raraka amin'ny ranon'ny renirano tiany indrindra, izay haidina amin'ny ranomasina. Avy any an-dranomasina, ny trangan-tsangany dia hanohy ny fampianarana ny olona.
noana sy mangetaheta
Ny sakafo noana dia te-hihinana. Ny hanoanana dia miankina tanteraka amin'ny faniriana. Fa izay indrindra no mahatonga ny hanoanana manintona. Vonona tanteraka amin'ny fiainana izy, ny sasany aza milaza fa velona izy.Ny anabavy koa noana: ny 'anarany dia' mangetaheta ''. Fa ho an'ny olona adala be ihany.
Mila aina ny hetaheta sy ny hetaheta. Mahantra ny filana ary mila. Tena ilaina an'izao tontolo izao ary mila volondolo foana. Ny filana azo tehirizina amin'ny hafanana. Tsy mila miasa mihitsy, mifikitra foana. Raha mila zavatra ianao dia mandeha miantsena.
Iza no mila fatiantoka amin'ny sakafo? Indrindra rehefa izy ireo ihany no ahitana ballast. Loan-kitapo. Izy ireo dia mameno ny banga, nefa mijanona ho miafina ihany. Io no fototra izay mamiratra.
Ny Psychosaurus dia tapitra tanteraka:
Ny tanjaky ny ranomandry toy ny habe dia nanangana ny sandriny. Rano miboiboika avy eo amin'ny tarehy mangatsiaka. Ny mason'ny vehivavy aloky dia mamirapiratra toy ny masoandro roa amin'ny alina. Nefa tsy ela. Jiro ny jironao izao. Ny vehivavy aloka dia manidina toy ny anjely mainty eny an-danitra. Vehivavy kamboty ny toerana tsy fantatra. Izay tsy mbola nisy olona aloha dia tsy misy, ary tsy misy koa ankehitriny. Ny fahalalako ny tsy maha eto dia akaikin'ny toerana foana. Mafana aho, nefa toa mafana ihany, satria tsy manana vatana hafa aho. Ny fitomaniana tsy misy lela dia mihodikodina manodidina ilay toerana foana. Na aiza na aiza dia misy ny tsy fatiantoka, izay misy tena tokony hisy. Raha tsy misy na inona na inona dia tsy afaka mahita na inona na inona ianao, indrindra fa raha tsy manana maso. Nefa hitako ny horohoro ary tsy fantatro ny antony.
Ny lavaka iray dia manondro ny tsy fahampian'ny fihodinana. Foana ny volontany. Matetika no misy lavaka iray izay miditra sy mivoaka. Indraindray dia mivoaka ny loaka ilay fijery ary miditra ao anaty lavaka ilay fomba fijery. Noana ny voa, maniry ny ho feno izy ireo. Ny fahafaham-pon'ny olona rehetra dia ho afa-po. Manana ny lavaka ny zava-misy. Ireo dia mangarahara ka tsy misy mahita azy ireo, eny fa na ilay fizika fizarana ampiasana lehibe aza. Ny tsy fahampian'ny akanjo dia hita amin'ny olona miboridana. Ny tsy fisian-java-malemy, amin'ny lafiny iray, dia mijanona ho mosarena ary tsy hita maso. Ny tara-pahazavana dia toa tsy misy. Raha feno ity banga ity dia miloaka haingana ny tampony, ary manjary mahia. Ny esthete dia manisy loko amin'ny lafiny rehetra ka mahazo fahatokisana tena bebe kokoa.
Ny biby mahazatra dia manana tongotra efatra, izany hoe "ohanina" na izy mihaona. Ny foto-kevitry ny biby dia teny iray karazana ho an'ny olona maro izay zara raha mitovy aminy. Tsy manana ravina ny biby ary tsy afaka manao baomba atomika. Biby no olona nihemotra. Na izany aza, indray andro dia hahatakatra ny teoria momba ny tsy fahatanterahany i Gödel. - Fa rehefa oviana?
Mety ho voankazo sy tsy masiaka ny natiora. Misy koa ny toetra nofinofy: ity toetra ity dia ny paradisan'ny olona na dia talohan'ny fianjeran'ny olona aza. Toy izao ny toetran'ny Charles Alemanina Charles Darwin: ady amin'ny matanjaka manohitra ny matanjaka kokoa aza. Ny toetra faharoa anananay dia ny kolontsaina. Ny toerana fahatelo misy anay dia antsoina hoe artifisialy. Tsy misy olona te hipetraka eo.
Ny fahefana vahiny avy any Soeda dia vita amin'ny ranomandry mangatsiaka. Io hery io dia mandeha amin'ny tany amin'ny endrika tovovavy taloha antsoina hoe Eisblume. Voninkazo vita amin'ny ranomandry, voninkazo tsara tarehy. Ny voninkazo dia mampahatsiahy ny lohataona satria ity no voninkazo vao maintso manakaiky ny hafanan'ny tanora. Ny voninkazo azontsika dia mamony ao anaty hatsiaka manirery amin'ny ririnina. Ny olona hafa rehetra, izay vita koa ho an'ny ranomandry, dia esorina voninkazo. Vita amin'ny hatsiaka koa ny Agnis, vita amin'ny ranomandry izy. Agnis dia mahita an'i Eisblume ary mafana fo izy. Ny frigids koa dia mafana indrindra. Satria mpivarotra gilasy dia Atavy Sumpfstein. Ireo boloky ny ranomandry dia manana fipoahana mipoaka rehefa tsy ela any an-tendrombohitra. Eisblume dia mahita an'i Mr. Sumpfstein: tafintohina izy,mihodina ao an-dohany ny baolina roulette. Tsy misy mahalala hoe ho tonga fefy teo amin'ny fitoerany fito ambin'ny folo ny baolina. Miaraka amin'i Agnis dia izy telo. Baolina be ranomandry na baolina roulette, baolina iray dia mitovy daholo. Ny bala dia banky ratsy very. Ary izao izahay miditra ao amin'ity banky ity ary manafaka ny hadalana. Very saina daholo ny olona rehetra: Eisblume, Agnis ary Andriamatoa Sumpfstein dia miaraka anaty boaty iray. Mitroka fadiranovana ianao: Ah, tsara izany. Afaka maimaimpoana izy ireo amin'ny farany!Agnis sy Andriamatoa Sumpfstein dia miaraka anaty boaty iray miaraka. Mitroka fadiranovana ianao: Ah, tsara izany. Afaka maimaimpoana izy ireo amin'ny farany!Agnis sy Andriamatoa Sumpfstein dia miaraka anaty boaty iray miaraka. Mitroka fadiranovana ianao: Ah, tsara izany. Afaka maimaimpoana izy ireo amin'ny farany!
Ny rà mandriaka ao anaty hafanan'ny hafanana matevina sy mahery vaika. Ny rà olombelona dia manokana manokana raha mbola mivezivezy amin'ny lalany izy. Mivezivezy ny ra, hany ka boribory. Manatanjaka ny faribolany ny ra. Ny rà ivelany amin'ny fantsona fanafody mangatsiaka sy tsy misy fo no efa maty.Matahotra! Biby mitoto ihany no mangatsiaka. Raha tsy mamirapiratra ny volo maintso ny repoblika, ny masoandro. Ny vava rehetra dia mahalala fa rehefa ny volana mamiratra dia mainty ny ra. Tsy mahita na inona na inona ianao mandritra ny andro.
Mandihy miaraka amin'ny lelafo midedadeda. Ny fandoroana ala dia mandrava ny haben'ny solika. Ny taraiky ny hafanana dia miditra ao anaty efitrano, ny nifin'ny tazo mamontsina. Maty ao anaty lavenona ny fon'ny afo. Mahagaga ny afo, nefa avy amin'ny solika no entiny. Ny sakafony hohaniny haingana kokoa noho ny nahandro, haingana be. Ny hafanan'ny afo dia matory tsara ao amin'ny efitrano tsy mety maty. Rehefa lasa adala ny hafanana dia mivadika ho hafanana.
Ny ankapobeny dia mampiseho endrika tahaka izay ilaina fotsiny. Ny zavatra manokana dia mampiseho zoro mazava kokoa. Ny jeneraly dia mitovy hatraiza hatraiza; Eo amin'ny sehatry ny zava-drehetra, ny jeneraly dia azo jerena amin'ny toerana rehetra. Ny dadatoan'ny volo fotsy amin'ny ankapobeny dia antsoina hoe salanisa. Ny jeneraly dia tsy maintsy ampifanaraka amin'ny manokana, izay miteraka adin-tsaina. Ny jeneraly dia manome fiarovana rehefa mandeha fialan-tsasatra amin'ny tsy mahazatra.
Aloky ny alokaloka
Alokaloka mijoro dia tsy maintsy mijanona foana, na dia mety handeha na aiza na aiza misy azy. Raha te hihetsika ny aloka mijoro, dia mandalo azy ny tontolo iainana fa tsy azy, izy irery no mijanona. Ka ny aloka mijoro dia afaka mihetsika ary tsy maintsy mijanona eo amin'ny toerana iray ihany mandrakizay. Ny aloka mijoro dia tsy manana orinasa. Mazava ho azy fa misy aloka mijoro hafa, fa any an-toeran-kafa izy ireo.
Ny lalana mankany amin'ny tanjona raha mbola tsy misy mpandehandeha esoterika. Ny faribolana kely iray dia manafoana ny fomba fiainana. Vetivety dia mandeha ny lalana tsy misy. Vokatr'izany dia tsy manana traikefa izy. Mafampana sy tsy misy hena ny fahombiazany ary tsy misy hena, fa ny faritra fohy kosa dia misy fiantraikany charismatic. Ny lalan-kely fohy indrindra dia tsipika fohy foana, ny tanjona dia antsoina hoe tsy misy dikany. Ny faribolana fohy dia miasa tsy misy fitomboana, tsy misy lalana. Nanoratra boky i Joachim Ernst Berendt: '' Tsy misy ny lalana, afa-tsy mandeha: mandeha amin'ny natiora ''. Teny an-dàlana ho amin'ny fanolorana ny bokiny dia fiara nitondra fiara izy.
Matahotra ianao sao hianjera ny fandehanana. Saingy misy fiantraikany lehibe ny fandehanana: mitanila foana. Mihetsika ao amin'ny lalantsara ny mijoro. Na izany aza, tsy mandeha mihitsy ny mandry.
Ny tendrombohitra nanondro dia tsy manana olana ary faly fa miroborobo sy lehibe. Ny lanitra koa faly raha ny tendrombohitra no mitsidika azy. Ny lanitra lehibe koa dia mila fandresen-dahatra.
Ny antony dia eto ambany. Izy io no fototry, gorodona, plinth ary fototra. Raha mijery ny ambany ianao dia tonga ny lavaka mangitsokitsoka. Tsy afaka mahita gravity ianao. Ny ambany sy ny lavaka dia mampitony ny foza. Ny asa tsara indrindra ho an'ny olombelona dia ny fidirany amin'ny faran'ny zavatra. Ny bitro matahotra ihany no te hanao zavatra ilaina, satria mahasoa izao tontolo izao.
Ny ambanin'ny tany dia mipetraka eto ambanin'ny tany. Saika tsy an'izao tontolo izao intsony dia tsy hainao, ka izany no antony tsy ahitanao an-trano. Ny maty dia mandry ao ambanin'ny tany, ary misy koa ny loharanon'ny fiterahana. Hatao ahoana ny zava-maniry rehetra?
Ny rahona dia ondry any an-danitra. Ny rahona foana no malahelo. Matetika izy ireo no mitomany. Miaro ny biby tsy izy ireo koa anefa izy ireo. Ny rahona manakatra ny tsara sy ny ratsy fanahy. Azonao atao ny milaza amin'ny endrik'izy ireo izay tonga ny ora. Mihetsika ao anaty rahona ny hetsika sy ny rano.
Tsy tokony hapetraka ao anaty salady ianao. Raha tsy izany dia mandrahona ny aretina! Ny fahalotoana dia mitovy amin'ny ota. Ny ratra dia azo jerena fa areti-mifindra, satria ilay fery dia mazàna ho crust maharikoriko eo amin'ny sisiny izay toa maloto. Ny fanodinana, na ny loko kosa dia manondro fanamelohana. Misy manaratsy. Maratra ve isika satria tsy lavorary loatra? Sa tsy lavorary isika satria naratra? Sa meloka isika rehefa mandika zavatra, lalàna na olona iray? Tsy mandratra anefa izahay! Tanteraka sy tsy manan-tsiny isika! Izay rehetra milaza izany zavatra izany dia mandratra ary noho izany dia meloka.
Ny rindrin'ny fonja dia mamorona fo. Ny rindrina ivelan'ny rindrina dia mainty amin'ny ivelany ary mena ny ao anatiny. Ilay gadra Rasputin dia tsy zandriny indrindra fa tsy ny zokiny koa, satria mbola voan'ny mony izy. Nogadraina ihany koa i Alzeria: Miara-matory i Rasputin sy i Alemania. Matahotra i Rasputin fa hanao fivontosam-panafody ny alemà. Ny Alemania dia mandao Rasputin. Mety tsy maintsy hanao Pippi vetivety izy, saingy tsy ho lasa lavitra be, satria ao amin'ny fonjan'ny fo isika. Ny tranomaizina dia tranobe tsy azo vonoina. Rasputin dia mijoro eo alohan'ny fitaratra ary maneho ny volon'izy ireo. Mandentika ny tsy manan-tsiny volafotsy ny fanina: maharikoriko tanteraka, ey.
Basy sy baomba atomika
Ny Ratsiraka dia totozy lasa nandeha. Izy ireo dia milefitra amin'ny radioactivity tsara indrindra amin'ny zavamananaina rehetra. Azo antoka fa ho tonga mpanjakan'ny tany izy ireo indray andro any. Mifamono mihitsy i Ratsiraka, tena mitovy amin'ny olombelona ihany izy. Mahafantatra izay afaka! Na dia ny hendry aza tsy manan-danja noho ny olona satria mianatra haingana be tsy mihinana sakafo poizina rehefa mahatsikaritra fa maty ao aminy ny teti-dratsy ao. Izany no antony mahatonga ny poizina raty fa tsy vahaolana maharitra amin'ny famongorana ireo zavamananaina ao am-bohoka ity. Tamin'ny Moyen age dia nampijalina tamin'ny voalavo ny olona ankehitriny, ny voalavo ankehitriny dia nampijaliana tamin'ny laboratoara siantifika. Fandresena ny olombelona izany! Avy amin'ny lasibatra hatramin'ny nahavanon-doza! Ao amin'ny Tempolin'i Karni Mata ao India, ny voalavo mahafatifaty dia raisina am-pitandremana. Any Andrefana ihany anefa, dia ny voalavo fanodinkodinana ihany no ao.Any Chine dia misy ny raton ihany koa ho famantarana zodiakaly. Saingy hoy ny psychosaurus aseptic: “Tsy miaina any amin'ny Moyen Âge intsony isika izao! Mandehana amin'ny otrik'aretina maharikoriko amin'ny otrikaretina! Fa maninona ireo mpanao politika no tsy manao na inona na inona? Tsy manao na inona na inona mihitsy izy ireo! "
Tsy afaka mikitika kink ianao satria lavitra be ny laharana fandihizana. Raha tsy misy kinks, dia misy ny zavatra. Misy tsipika manomboka eto. Ara-dalàna raha izany dia mahatonga anao kivy. Siansa tahaka ny tsipika ny siantifika sy mpikaroka. Ny tsipika iray dia tsy mihinana ny fiainana. Ny tsipika dia manangona fiainana ary mahazo angovo avy ao aminy mba hahafahana manafana ny efitrano ka hatramin'ny 20 degre.
Fivoahana eny ivelany
Ny morona dia fantsona iray izay misy ny lazan'ny tehezan-dàlana, mitodika manatrika zoro iray izay mifanaraka amin'ny lakan'ny tehezana. Ny fironana toy izany dia tsy mitombina, fa mifanaraka amin'ny fitiavan-tena.
Ny tsara dia hazo mamoa isaky ny taona. Ny rany dia feno rà mandriaka; ny raviny dia afaka mihomehy. Tsara ny maro loko, ratsy ny volony. Mihinana ny tsara ny devoly. Ny tsara dia mety ho avy aminy ihany. Fa ny ratsy kosa miankina amin'ny fandringanana ny tsara. Tsy afaka mandresy na oviana na oviana izany ny ratsy.
Ny sira dia vita amin'ny sodium sy klôro. Mitsangana eo amin'ny tongony roa ny mitsangana, fa ny fisiana kosa mila fananana. Mila ny ampahany misy azy ny fisiana, tsy mety ho azy irery io. Ny tena mivaona no misy. Ilay teny hoe "stock" dia tena akaiky an'io zavatra io.
Totozy sy ramanavy
Ny totozy dia manana tongotra efatra ary mihodina manodidina ny baikon'Andriamanitra. Na izany aza, ny totozy sasany dia tsy niraharaha ny fiainany ary nivadika. Mihantona isan'andro izy ireo (mihintsana) ary amin'ny alina dia misy fety (misotro ra sy zavatra). Jamba ny totozy dia jamba. Izany no fanasazan'Andriamanitra amin'ny fahotany. Toy ny vahaolana vonjy maika, ny totozy manidina ankehitriny dia tsy maintsy mahita eo amin'ny sofiny. Mahafinaritra izany.
Vetivety dia mipetraka eo amin'ny tranobainan'ny anorexia ireo vehivavy marevaka. Voampanga ho mpiray tsikombakomba amin'ny flabby sy matavy. Raha maniry lanja ny manify, dia tsy maintsy antsoina hoe "mangingilana" izy. Indraindray ny manjary no misy fiantraikany mahery kokoa noho ny matevina, satria afaka mametraka votoaty betsaka amin'ny tsinay mamy izy. Noho izany, ny manify matetika dia marani-tsaina kokoa noho ny matevina. Izany dia tsy mihatra amin'ny drills board manify, satria izy ireo dia misy board matevina eo alohan'ny loha.
Schmidt no anarako ary maty aho. Niaina fiainana manota aho. Tao amin'ny toeram-piasako tany amin'i Satana & Sons, dia nivadika ho 100 euro ny tompon'andraikitra tia vola. Tsapako ny fahafahako miaina fiainana sambatra aorian'ny nahafatesana: narotsako haingana tao anaty paosiko ilay volavolan-dalàna ary nandoko lakroa tamin'ny hoditra ivelany. Voafandrika ny lehibeko. Afa-tsy ny toky nomeny fa tsy handeha any amin'ny afobe aho taorian'ny nahafatesako dia nesoriko indray ny hazo fijaliana. Fotoana fohy taorian'izay dia nibolisatra tamina sela akondro teo anoloan'i AOK aho ary nianjera tamin'ny lamosin'ny lohako teo amin'ny lampivato mafy. Maty teo no ho eo aho.nefa tsy mbola nanao ny soa. Izao aho dia mitsangatsangana eo anelanelan'ny lanitra sy ny helo ary tsy fantatro intsony izay hatao.
Fred: Tena ilaina ny mijaly. Iza no adala tena namorona an'izao tontolo izao?
Fanadiovana: Miaro amin'ny fanaovana hadalana ny mijaly. Izy io dia misakana anao tsy hisotro labiera be loatra. Ny ratsy dia mitondra soa.
Fred: Tsy misy fomba hafa? Karazana fitiavana?
Papa: Tsy mety diso ny toa ahy (toa ahy) Andriamanitra dia efa ho fantany ny antony namoronana an'izao tontolo izao tahaka izao.
Mephisto: Tafiditra ao anatin'io hery io aho izay maniry ny ratsy foana ary mamorona tsara hatrany.
Bert Hellinger: Amin'ny ambaratonga avo kokoa dia tsara ihany koa ny ratsy.
Fred: mipetraka eto an-tany aho; ambany ny tany, ny haavo avo kokoa dia tsy misy ilana ahy. Tsy misy mandresy lahatra anao ny amin'izany.
Detlef: nijaly koa ny andriamanitra masoandro. Nodimandry ho olona teo amin'ny hazo fijaliana izy ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo.
Fred: Ao anatin'ny firaisan-kina miaraka aminy izany. Mahatsapa tsara kokoa aho.
Lehibe noho Andriamanitra ... Andriamanitra lehibe noho ny olona eritreretiny. Mba tsy ho eo amin'ny lafiny azo antoka, tsy te hanoratra zavatra ratsy momba an'Andriamanitra aho, tsy fantatrao mihitsy. Raha tsy Andriamanitra dia ny devoly. Tena Andriamanitra ve ny Ratsy? Sa ny fisiany no mihinana ny tsara? Raha tsy misy afa-tsy Andriamanitra iray, dia ny tenany no tena hiantso azy hoe Allah. Ny tsy miandany na roa miaraka amin'ny A-feom-bolo rehetra dia mihetsika ny L-tsy manam-petra. Raha misy andriamanitra maromaro, dia lasa maizina sy be fitiavana kokoa ary azo takarina amin'ny olona ihany koa. Ny andriamanitra tsirairay amin'ireo andriamanitra hafa dia samy manana ny andraikiny manokana. Tsy mila manana anarana 99 intsony i Allah, satria misy andriamanitra 99. Ary ilay andriamanitra zato dia mety hampiray ny andriamanitra rehetra ka izay noheverina.Ny polarization amin'ny fanatic amin'ny tsara sy ny ratsy dia mihena amin'ny andriamanitra maro be. Indraindray, antsoina hoe anjely, archangels na zavaboary avo kokoa koa ireo andriamanitra.
Ny tsaramaso dia zava-baovao. Mizara ny tongotrao. Ny tena fizarana eo amin'ny toetra dia manana ny fotony. Ny hita ivelany kosa dia mampiseho ny fitoviana ny lasy. Ny tongolobe dia manampy amin'ny vampira sy mpamosavy. Manatanjaka ny ra ny tuber ka mahatonga azy tsy hahomby amin'ny katsentsitra ary na ny vazivazy aza tsy manam-pitiavana. Ny leek schizophrenic dia mamono ihany koa ny aretin-tsaina, toy ny tapeworm sy bakteria putrefactive. Mizarazara ny olombelona toy ny setroka sigara. Ny sasany toa azy: olona tsara ireo. Fa ny olon-dratsy (toy ny vampira, mpamosavy, Nazis, mpandoka zaza, kapitalista ary mpifidy ny Greens) mahatsiaro ho voaroaka noho ny fofony.
Fifanarahana amin'ny devoly
Afaka ny ho lasa iray mahafinaritra sy manan-karena ny olona iray amin'ny alàlan'ny fanaovana fifanekena kely ao amin'ny biraon'ny fanompoana ao amin'i Satana & Son: Ny mpitandrina (devoly) dia mahatanteraka ny fanirian'ny tontolo rehetra. Ho valin'izay, ny kontraktor dia nanolotra ny fanahiny taorian'ny fahafatesany ho an'ny antom-pivelomana any amin'ny afobe noho ny antony fikarohana. Ara-dalàna ny fifanekena raha misy ra mitete avy amin'ny mpihetraketraka.
Manontany tena i Arnold momba ny valan'aretina izay tonga eo amin'ny tany ary mamono ny olon-dratsy rehetra. Ireo marary tsara dia tsy marary amin'ny toerana voalohany na mora tavela amin'ny aretina. Anisan'ny tsara fanahy i Arnold, mazava ho azy. Na dia ahoana no ahafahany mahazo antoka tsara? Ahoana kosa raha ny valan'aretina fotsiny no mamono ny olona tsara? Midika izany fa mahazatra amin'ny tsy rariny eto amin'ity tontolo ity. Lasa natahotra i Arnold ary te hanao vaksiny amin'ny fanoherana azy, na dia fantany aza hoe tsy azo atao izany.
Ny fahatsiarovan-tena dia manapaka ny maha-zavatra. Ny fanapahana dia kanto kokoa noho ny fanindriana, izay no antony tsy hananan'ny moka ny anaram-boninahitra. Ireo fanahy matanjaka dia manana ny gony mba hakana herisetra, ny kanosa dia tsy misy kapa ao an-trano. Tsy tokony manapaka ny rantsantanana ianao! Ka ry malalà: tandremo fotsiny! Ny lokon'ny voamaina dia antsoina hoe maranitra. Ny paiso mafana sy ny baomba fanaovana firaisana dia mety ho somary mavesatra ihany koa indraindray.
Mivelatra ny sandry. Amin'ny tanana dia manomboka mamony ny fitaovam-piadiana. Fihenan'ny tanana ny tanana, mampatanjaka ny tanana amin'ny fitaovana. Ny sampana no sandrin'ireo hazo.
Ny sisin-tany iray mampisaraka ny iray. Manomboka na mifarana eo amin'ny sisin-tany. Ny sisin-tany dia manamboatra sambo ho an'ny fiainana. Ny rà no mila miaina. Ny trano iray mametra ny fonenan'ny rindriny. Rehefa miala amin'ny tranony ny aina, dia milentika any amin'ny ranomasina tsy manan-kialofana.
Ny lovia dia misy boribory boribory. Tsy toy ny firakotra ilay sisiny dia mameno ny fivoaran'ny tompony. Ny firavaka dia firavaka, fanerena hampijanonana ny fihanaky.
Ny teny hoe "izao tontolo izao" dia mamaritra ny fizotran'ny zava-drehetra. Izao tontolo izao dia azo takarina amin'ny haben'ny famonoana. Tsy mifarana ity tontolo ity. Ny masin'olombelona dia tsy mahita tohana eny an-dalambe tsy misy farany. Tontolo iray azo antoka dia mihidy amin'ny sisiny. Ao ny tontolo azo antoka dia mamihina ny fetra tsy misy fetra miaraka amin'ny sandriny.
marevaka sy maizina
Gustav dia jamba amin'ny katsaka roa. Tsy afaka mahita na inona na inona ny tongony. Tsara izany, satria raha tsy mahita zavatra ianao dia tsy kivy be. Koa faly i Gustav. Misy olona manana daty jamba. Jamba loatra ianao ka mahamaika azy. Ny mainty koa mahita mainty, fa mandre mazava.Mahita ny maizina ve ny mazava? Mahita ny mazava ve ny haizina?
ny vehivavy volana
Ny volana mihomehy amin'ny haizina. Hita ho feno izy. Amin'ny maha-volana feno dia lehilahy izy. Raha tsy izany dia vehivavy izy. Sa nisy fomba hafa teo? Mikotrokotroka eran-tany ny volana. Tsy te ho hita izy; dia ny sela lava, ny ramanavy ary ny goaika ihany no mahazo manao azy.Ny volana dia manjary mangingina ao amin'ny fanjakan'ny ratsy, dia fitaka amin'ny takolaka boribory, fitiavana taloha, haizina manjelatra atao hoe volana. Mamirapiratra ny volana rehefa matory ny olona mendrika.
Indray mandeha monja dia mitovy foana. Fotoana ihany no fotoana. Ny "fotoana" mitobaka dia tsy misy dikany. Ka tsy misy fe-potoana. Ary izao dia efa mihamandina ny famantaranandro. Izany no mahatonga ny famantaranandro ho mpandainga.
Tsy mahatadidy mihitsy ny olona. Hitantsika hatramin'ny ankehitriny izao ny lasa. Isan'andro dia tsaroanao ny lasa taloha. Ny tena nanjary tsy azo niniana natao dia very.
Tany am-piandohana dia misy ronono. Avy amin'ny ronono izao rehetra izao, ka izany no mahatonga ny iray miteny ny Milky Way. Ny ronono dia avy amin'ny zanak'omby avy amin'ny omby tany am-boalohany, MONONANA lehibe.
Ny freshness dia mihinana toy ny hazavana ao amin'ny hamandoana fiainana. Ny hena vaovao dia salama kokoa noho ny hena maty. Ny ranom-boankazo dia tsara kokoa noho ny ra, satria ny biby ao anaty ny fitiavan-karena.
Ny sokatra dia embryonika taloha. Izy ireo dia avy amin'ny fotoana izay tsy nisy fotoana mihitsy. Hafa koa ny resaka any. Tsy ahitana ireo singa bitika kely indrindra, fa kosa pulpitra maivana rehefa mihazakazaka ny lalana mafy etsy sy eroa. Tsy maty ny tany tena izy.
Mitsoka mangingina ny rivotra noho ireo sisan-javatra rava ny lapa. Ny rindrina maizina dia tsy misy hetsika. Omaly ny afo, omaly. Ny totozy iray dia afaka manoratra ary milaza amin'ny taratasy ny tantaran'ny fahasimban'ny maty. Manidina eny ambonin'ny masoandro mena ny vorona ka tsy hita intsony.
Ny Ur dia tonga aloha. Ny antony, ny fiaviany, ny lasopy primordial, ny Uranus, ny biby fiompy, ny razana, ny ala praiminisitra, ny big bang, ary mazava ho azy ny taratasy fanamarinana sy ny raibe. Ity farany dia tsy mbola nahalala an'io fiteny mampidi-doza io. Any Vienna, ny "mampidi-doza" dia midika zavatra mampidi-doza indrindra.
Tovoha ny tany! Raha latsaka ny tany ny tany, dia ho lavo tsy ho eto ambonin'ny tany ny mponin'i New Zealand. Avelao ny NASA hitazona ny sariny sandoka. Tsy maintsy nivezivezy be izy ireo!
Ny fiandohana dia afaka manomboka tampoka toy ny sprint na ny ahitra toy ny zavona amin'ny fararano. Maniry ny zavamaniry ary miteraka tsy mikraoba eny amin'ny hopitaly ny zaza. Ny fanombohana dia midika hoe mifarana: ny fahaterahan-jaza dia mifarana ny vohoka. Ny fiandohana dia tsy mbola mahalala ny tenany: amin'ny faran'ny farany dia mahalala hoe iza io.
Mihinana sôkôla ny ankizy. Mihinana sôkôla mihaotra ny olon-dehibe. Ny vokatra roa dia matsiro toy ny sôkôla. Araka ny hitanao dia tsy manan-danja manokana ny ankizy. Sakafo sôkôla mihinana toa anao sy izaho izy ireo. Tsy mila hosotroina koa ny ankizy na dia mandeha amin'ny akanin-jaza aza.
Tia ny fahalalahany ny toadstool. Mila orana avy any ambony. Saingy ny holatra mena dia mandà ny maha-avy amin'Andriamanitra. Ny lalam-pitondran-drivotra dia te-hitazona ny zava-drehetra. Izany aza dia tompon'ny karavasy. Ny Dominance no zava-dehibe aminy. Mirotsaka amin'ny orana ny orana. Ny fangaron'ny holatra dia milaza fa misy zavatra hafa ankoatry ny hanjaka, fa ny agaric tsy sahy manokatra ny tenany. Avy eo no ataony, satria be herim-po izy. Avy amin'ny farany midina any anaty holatra ny tahotra. Enao. Tsy zaza toadstool intsony izy izao, fa totozy kely, maniry te hiaina fiainana an-dakilasy eo anaty lava-bato. Tsy mandeha anefa izany. Mandinika ny filozofia ny totozy ka manavao izao tontolo izao ary lasa malaza.
Martin Luther sy Paul dia matin'ny tselatra. Vetivety dia nisy tselatra, nanjary olona nohazavaina izy ireo. Handoka antsika ve ny tselatra? Sa ilay jiro dia hazavana fohy fotsiny izay mamorona fihatsarambelatsihy? Mila manandrana azy ianao mandritra ny kotrokorana manaraka.
JF Kennedy ao Bielefeld
Heverina ho mpiondana tsikombakomba milaza fa tsy misy akory ny tanànan'i Bielefeld. Raha jerena amin'ny fotoana iray dia tsy azo atao intsony ny alokaloka manarona ny tsy fisian'i Bielefeld. Izany no antony maha zava-dehibe azy ireo ny fanolorana ny firaisana tsikombakomba ho teoria na vazivazy fotsiny, mba tsy hisy hahalala fa ny famelana an'i Bielefeld no fahamarinana tsy misy dikany. Fa tsara vintana fa ao i Bill. Tamin'ny 24 Jolay 1963 dia nitsidika ny filoha amerikana John F. Kennedy tao amin'ny Trano Fotsy i Bill Clinton tamin'ny 24 Jolay 1963 ary naninjitra ny tanany. Clinton dia nihiaka hoe: "Izaho no ho filoham-pirenena!" Tamin'ny alàlan'ity fihetsika mahagaga ity dia nangalarin'i Clinton ny fiaviany sy ny maha-izy azy avy tamin'izany ny filoha Kennedy. Vokatr'izany: voatery maty i Kennedy. Na fa tsy doppelganger aza izy.Ny tena Kennedy dia vakiana be. Rehefa nandrahona ny fahazavana hiharihary ny fisian'i Bielefeld dia nirehitra indray i Kennedy. Taorian'ny nandalo fandidiana vita kosmetika sy fanazaran-tena tany Alemanina, i Kennedy dia Ben'ny Tanànan'ny alokaloka ao Bielefeld eo ambanin'ny anarana diso Pit Clausen.
Sindbart: Eh, afaka mahita anao aho!
Rivotra: Fahavoazana! Izaho koa ianao. Mahagaga rehefa dinihinao fa tsy misy ny roa amintsika.
Sindbart: Rehefa mifanena ny olon-droa izay tsy misy akory, dia nanjary tena nifandray sy nifankahita, satria nihaona tamina ambaratonga mitovy izy ireo, dia ny haavon'ny tsy misy.
Windbart: Zara raha mihaona amin'ny karazany hafa ianao. Zara raha mahita olona ianao. Tokony hanararaotra hanana resaka lava momba ny fitaka sy ny fahamarinana isika.
Sindbart: Tsara, ho any aho.
Mamela ny fahalehibeazany ny ranomasina satria miery amin'ny miafina izy. Ny ranomasina dia vokatry ny ranomason'ny andriamanitra (ranon'ny sira) ny ranomaso. Sakafo ho an'ny tany ny ranomasina. Ny hetahetan'ny efitra kosa anefa dia efa nihena hatry ny ela, tsy mila miaina intsony ny efitra.
Tsy mijery fahitalavitra na tsy mamaky gazety i Arnold Heitermann. Ireo lohateny ihany. Ho an'i Otto Normal, izay zava-dehibe amin'izao fotoana izao, tsy manan-danja ny zava-drehetra. Mahaliana amin'ny sary lehibe kokoa i Arnold, fa tsy amin'ny ango. Ankoatra izany, tsy fantatrao mihitsy raha marina ny fampahalalana. Raha tokony hamaky ny lohateny hoe: "rahampitso dia hifarana izao tontolo izao!", Azo antoka fa hamaky feno ny fampahalalana ny momba izany ny Mr. Heitermann. Tena misy fiantraikany aminao ny faran'ny tontolo, noho ny antony manokana.
Tian'ny olona ny mihetsika. Raha mamela azy io, dia mikoriana ihany koa. Vaovao ny rano ary mihira ho azy irery. Light glitters miaraka amin'ny hetsiky ny onja. Ny rano na aiza na aiza misy ny fiainana. Tsy mihetsika ny rano raha toa ka tsy mijanona ao anaty rano izy. Manala ny rano ny hatsiaka, mijanona tsy azo tanterahina ny hatsembon'ny rano.
Tsy tokony ho sahona ny olona fa tsy sahona matahotra. Izay rehetra naorina ho akaikin'ny rano raha ny sahona dia mbola mitoetra ao anaty fanahy. Ny fanahy sy ny farihin dia mitovy rano, trondro sy sahona mahalala izany. Tsy mahazo matahotra ny rano ianao, fa ny biby maina ihany no afaka manontany. Tsy ny sahona mampatahotra! Tsy sahy miala amin'ny fahalalahana ny sahona. Ny sahona dia trondro tsy nitondra azy tany an-tanety: tsy fahombiazan'ny evolisiona. Tsy trondro intsony izy, fa tsy ampy hanamboarana gidro koa. Ny sahona dia mbola maintso ao ambadiky ny sofina, fa tsy eo ihany. Matetika ny sahona dia mahazo ratra, saingy antsoina hoe mpivady izy ireo.
Mitsambikina avy eny an-tampon-trano iray any Roma, tanàna mahonena, ny goaika. Ny henan-kisoa dia nikapoka ny gorodony etsy ambany tamin'ny lamosiny. Tsy nisy namaky na dia ny goavam-be aza dia nihomehy mora foana izy ary niaina. Ny boaramanidina toy izany dia tena mifikitra. Tsy ho ritra ny ranao. Ny ranon-dranony dia mihetsiketsika tsy misy hatrizay amin'ny alàlan'ny famoahana ny lalan-drà ao anaty andiany mahery.
Tsy manana loko ny fihetseham-po. Mpanao jiolahimboto tsy mahatoky izy ireo, ny hany fanampiana azy ireo dia ny tsy fahatomombanana. Hampanofa ny fihetseham-ponao ve ianao? Mafana ny fihetseham-pon'ny olona sy ny fifamoivoizana, mihamatanjaka sy malemy izy ireo, miverina toy ny soavaly amin'ny carousel izy ireo.
Ny halalin'ny tontolo dia milentika ao anaty lalina. Matory ny zava-drehetra ary eny an-danitra ny volana. Ny jiro volafotsy dia mikoriana ao amin'ny loza. Tanana iray no te hitaona ny volana ary mahavita izany: nanorotoro ny volana. Rà volafotsy izay mitovy loko mainty, midina avy amin'ny baolina izay iray volana. Mihorohoro izao tontolo izao.
Ny fahafatesana dia mandà ny fiainana ary mahatonga azy ho afaka miaraka amin'izany. Inona no tokony hiveloman'ny voromahery? Inona no tokony hokendriny ao ambadika? Izy irery ihany no afaka miaina amin'ny famonoana biby hafa. Toy ny lehilahy! Mahasoa ny voankazo. Nefa mila mamaly ny antson'ny voajanahary ihany koa izy ireo. Rehefa dinihina tokoa, zavamaniry misy zavamananaina ihany koa. Ny legioma dia tsy ampy vitaminina. Ny tsy fananan-tsiny no mahatonga azy ireo ho tsara tarehy, biovampires izy ireo. Misotro ny ran'ny fitondran-tena ny voamadinika. Ny mpihaza no lehibe indrindra.
Ilay mpijery TV maty
Mandeha ny fahitalavitra ary misy hipetraka eo anoloany. Ny taolan-dàlany tsy misy na inona na inona dia tsy mahatsikaritra ny zavatra rehetra avy amin'ny fandaharana. Misy olona manilika ny fahitalavitra: Ny lehilahy iray izao dia mahatsapa fa tsy misy zavatra iray ary tezitra izy. Ny fisintonana ihany no nahatsikaritra ny fahafatesana fa maty izany.
Ny tanjon'ny fiainana dia ny mamahana ny agronomista lehibe. Farafaharatsiny fa ny hevitr'i Dr. Lightbrain. Mino izao manaraka izao izy: Avy any an-danitra lavitra dia misy mpahay toekarena lehibe mamboly ny voa ny fanahintsika ho any amin'ny tany fanatanterahana. Amin'ny alàlan'ny fiainana dia mitombo ny fihenan'ny fanahy ho lasa vokatra mahavokatra. Ny mpahay toekarena lehibe momba ny fambolena dia manodina an-tsofina ity taorian'ny nahafatesantsika ary nandany izany. Dr. Brainlight dia rahalahin'ny kambana an'i Dr. Lightbrain. Isa-maraina, Dr. Atsipy i Brainlight aorian'i wholegrain muesli rehefa mieritreritra ny teoria-masin'ny rahalahiny izy.
Ny masoandro no ivon'izao tontolo izao, misy habaka bebe kokoa noho izany eny amin'ny habakabaka. Manana kibo lehibe sy miramirana izy. Ny masoandro dia niteraka amin'izao tontolo izao. Ny masoandro dia mihinana an'izao tontolo izao. Samy mitovy. Ny masoandro daholo. Fotsy amin'ny antitra ity, misy mavo amin'ny tanora. Tsy milay maso akory ny masoandro.
Ny vampira dia mijery ao amin'ny fitaratra: lehilahy iray manana volo mainty sy solomaso mijery volafotsy, manana tarehy mahia izy. Mihevi-tena ho toa olona mahazatra amin'ny fitaratra ilay vampira. Ny undead dia tsy mahalala afa-tsy ny fitaratra, raha mijery mivantana amin'ny tanany sy ny vatany izy, dia tsy mahita olona na iza na iza. Tsy mahazatra izany, tsy ho an'ny vampira ihany. Azo antoka fa manana rabies izy.
Ny zavamaniry dia biby maitso izay tsy afa-mandeha. Ny raviny dia vato namboarina tamin'ny rano. Maitso ny zava-drehetra. Ny vato, ny rano ary ny masoandro rehetra no manome aina. Ny zavamaniry dia mihabetsaka indrindra amin'ny fitomboana ary mahafinaritra ny mitombo. Ny fitomboana dia tsy misy fototarazo, mahafantatra azy ireo isaky ny fotoana. Tsy mivoatra ny drafitra na dia tanteranao aza. Ny zavamaniry kosa etsy andaniny, mitombo amin'ny fiainana.
Vetivety matevina vitsivitsy no nahavoa ny lohan'izy ireo. Manampy ny faharetana sy ny faharetana. Masiaka ny tenda. Matetika no sarotra ny masira. Na izany aza, ny penis dia tsy sarotra. - Fa maninona? - Ny faran'ny fahasarotana dia mijoro ho toy ny tsipika manelingelina ao anaty efitrano. Tsy tokony hohadinoina ny tohina, azonao atao ny mametaka ny lohanao. Rehefa mifandona ny rindrina roa, ny fifandonana dia antsoina hoe sisiny. Ka ny sisiny dia vokatry ny fifandonan'ny olona. Tsy natao ho an'ny fo torotoro izany. Vato koa ny vato. Ny vato dia zavatra, tsy manana endrika izy, satria ny vato toy ny vato hafa. Mitovitovy ny azy rehetra. Sarety, latabatra na borosy nify, zavatra daholo ireo rehetra ireo. Ny vato mandry manodidina azy na aiza na aizaantsoina hoe zava-misy izy ireo. Azonao atao ny mamely ny karandohan'ny olona amin'ny vato. Zava-dehibe izany tamin'ny vanim-potoanan'ny vato. Androany dia afaka miteny sahady ny vato sasany, ireo vato ireo dia antsoina hoe "finday". Raha mieritreritra momba azy tsara aho: misy vato tsara koa, izany hoe vatosoa. Manangona azy ireo ny dragona.
Mafana ny manangona, tery kosa indraindray. Ny izay angonina dia manome fiarovana ho toy ny varotra. Sa mavesatra. Sarotra ny nangonina noho ny fanangonana. Raha sarotra kokoa ny manangona noho ny nangonina, dia misy miteny hoe '' mihaza ''.
Ny superfluous dia tsy ampidirina ao anatin'ny nahalehibe azy. Ny superfluous dia tsy nahafantatra ny ranon-javatra nandritra ny fihanaky azy. Na dia mety manankarena aza ny tondradrano, indraindray manome izany, tsy mahasoa afa-tsy ny manaparitaka ihany ny harena be loatra fa manelingelina ny zavamananaina amin'ny fampandrosoana azy. Fnari-pako fotsiny no mihoatra.
Hugo dia manana ahiana. Ny anjarany dia ny fikorontanan'ny efijery eo amin'ny efijery dia manelingelina azy. Izany dia manery an'i Hugo adala. Hugo dia voan'ny tsy fahatanterahany ny tarehiny nandritra ny am-polony taona. Nijoro teo anoloan'ilay fitaratra, nijery ny fihodinam-bolany izy mandra-pandrika ny mason'izy ireo. Hugo dia misy kirihitra miaraka amin'ny quirks Fa amin'ny faniriana tsirairay ihany. Raha toa ka diso avokoa ny zava-drehetra, toy ny fikandrana fikandrana tanteraka, tsy maninona i Hugo. Hugo tokoa i Hugo.
Ny eritreritra tsy misy dikany dia mamelona ny oram-panala maina. Ny vehivavy mariky ny volo fotsy dia antsoina hoe neurosis. Tsy mampidi-doza tanteraka izy, izy Woody Allen. Mampihomehy momba ny neurosis ianao, satria mampihomehy ny olona mahatsikaiky. Tsy tena mampidi-doza anefa ny oram-panala taloha. Tsy misy rà hikoriana amin'ny oram-panala, fa ny ririnina omaly dia mankaleo ao aminy. Ny orampanala taloha dia miditra amin'ny psychotherapy. Ny fitsaboana toa izany koa dia neurosis, fotsy tahaka ny oram-panala vaovao.
Ny alika sy ny saka dia miditra fitsaboana. Ny mpitsabo dia hyena. Alika sy saka te maniry ny hamonjy ny fifandraisany. Tsy nahomby ny fitsaboana. Nahoana? Inona no mety ho izy? Azo antoka fa miaraka amin'ireo mpitsabo, manana olana daholo izy ireo.
Nandeha tany amin'ny elooro i Cheplin ary nihazona ny orinasany. Tsy maintsy namono olona be dia be izy mba hahazoana vola. Ny fijalian'ity izao tontolo izao sy ny vehivavy izao dia tsy azo hodinihina. Cheplin dia manohana ny fandraràna ankapobeny amin'ny hatsikana manerana an'i Alemana, ankoatra ireo antsoina hoe foibe fihomehezana, izay ahafahan'ny olona mihomehy mafy rehefa avy mandoa onitra fanesoana.
Faly ny vavaky ny fihomehezana. Ny fihomehezana mafy dia nivadika fihomehezana. Ny fihomehezana mihomehy dia tsy afaka hiakatra avy amin'ny faran'ny boribory. Tsy mampihomehy ny tena fihomehezana, sambatra ihany. Ny vazivazy fanerena manafintohina fotsiny dia avy amin'ny hazo fijaliana.
Isolde: Detlef, miaraka aminao tsy hainao mihitsy na izaroa ianao na manan-danja.
Detlef: Tena tsotra: raha mahafinaritra ahy, avy eo aho tsy matotra, ary raha marary aho, mandeha ho azy fotsiny.
Isolde: Ahoana no hilazako zavatra iray ankoatra ny zavatra hafa?
Detlef: ny voalohany dia ny andro na dia ny farany aza dia ny raharaha amin'ny andro hafahafa. Sa nisy fomba hafa teo? Misavoritaka be aho.
Isolde: adala miaraka amin'io lehilahy io aho!
Ramatoa Dr. Kackebart-Struller: Man Otto! Fantatrao ve izay ataonao amin'ny layer ozonina? Miaraka amin'ny hatsiaka rehetra, tsy ny asshole ihany no mihalehibe, fa ny lavaka ozonina koa. Miaraka ao amin'ny habakabaka ny metana, mandatsaka ny habakabaka izay mandany ny tany. Aza maty! Mila mamonjy ny tontolo iainana isika!
Otto Struller: Marina ny anao, Mausi, marina ianao. Mankany amin'ny attic aho izao, hamahanay ireo voromby.
any anaty ala ala
Any amin'ny ala dia mandao ny taniny ny fakany ary mihazakazaka eraky ny tany. Tsy miverina ny fandriam-pahalemana, fa mandehandeha. Mandalo any an-tendrombohitra izy io, mandringana any amin'ireo lohasaha. Indraindray koa izy dia mitsambikina.
Mihodina na boribory ny hetsika manodidina ny afovoan-tany. Ny fihodinan'ny kodiarana dia voafandrika. Tsy mihodina io horonan-taratasy io, mijanona ho tsy mihetsika afa-tsy ny afovoan'izy io. Raha ny horonana tokony hifindra avy amin'ny faribolana iray amin'ny kianja iray dia malalaka ny hifindra. Tsikaritry ny bisikileta fa efa mandalo azy io ny tany, mijanona ny bisikileta.
Mandria sy manao fanatanjahan-tena
Ny fialan-tsasatra dia mankafy ny maha-izy azy. Ny fitsaharana dia azo raisina ho toy ny tsy fisian'ny hetsika ivelany ivelany manery. Ka tsy misy fitsaharana any amin'ny disco. Tsy eo amin'ny autobahn ihany koa. Ny hetsika avy any anaty miaraka amin'ny fialan-tsasatra dia azo atao. Ny fitsaharana dia misy fitsaharana. Ao koa ny fahatoniana manery an'i Buddh Buddhisme. Ny tony toy izany dia ny fambolena fahafatesana eto an-tany, miorina amin'ny famoretana sy fanimbana amin'ny fivotoana. Ny tena tony dia na izany aza, miaina ny fahafahana.
Ny hummingbird dia manidina any amin'ny lapa mahafinaritra izay mihodina ny olona. 52 ny olona tsy manana satroboninahitra mipetraka ao amin'ny lapa. Tsy misy olona ary olona rehetra no mpanjaka sy adala miaraka amin'izany. Ireo olona ao an-dapa dia hermaphrodites avokoa. Afaka manao izany amin'ny tenanao ianao raha nahatsapa izany. Saingy liana kokoa amin'ny famolavolana tontolon'ny lalao izy ireo: mivazivazy izy ireo. Ny filokana dia filokana lehibe. Miara-miasa amin'i Jojos, ireo mpanjaka ianao. Toy ny adala ny mpanjaka dia nametraka ny satroboninahiny teo amin'ny efi-trano lehibe teo ambanin'ilay loharano. Ny satroboninahitra dia satroboninahitra ho an'ny olitra. Nanoratra zavatra tsy misy dikany i King Crimson. Tsy afaka miresaka amin'ny lehilahy iray toy izany ianao.
Mamofompofona any amin'ny tanin'ny tsy misy olona ny asa, fa ho reraka, satria raha ny lamosina dia ny tratran'ny asa no mameno fireharehana. Ny fahatanterahany dia mahita asa amin'ny aretim-po. Ireo izay miasa dia afaka manadino haingana ny fatiny any amin'ny lakaly ambany. Manantena fanavotana ny asa, nefa tsy hanaiky izany mihitsy. Jamba ny asa, tsy mahatsikaritra fa miasa izy io. Kristy efa Mpamonjy hatry ny ela. Ny olombelona dia mamerina ny tenany amin'ny alàlan'ny asa: Amin'ny psychotherapy dia miasa ny tenanao ianao.
Ny tena mihetsika dia ao anatiny. Ny soavaly mandeha irery, fa ny fiara kosa entin'ny herin'ny mavo. Ny hetsika dia miroso amin'ny fihodinana bibilava, izany hoe onja. Mandeha, milomano, manidina na mitondra fiara, mihetsiketsika avokoa ireo. Ankehitriny dia mihetsika ny ankamaroany. Afaka mifindra tany koa ny olona iray. Saingy tsy misy olona afaka maka izany intsony. Mijanona eo amin'ny tranokala ianao.
Rivotra ny tavan'i Frigg. Miala ny fotoana. Lasa ao anaty lavaka ny rano. Mihazakazaka ny zava-drehetra, mandositra. Mihodina ny urine, mandalo ny ranomaso. Tsy misy olona miaraka amin'i Frigg, afa-tsy ny rivotra ihany. Rakotra kiraro matevina ny tongotrao. Ahoana kosa raha mandeha tongotra mitondra tongotra izy? Avy eo dia hitondra azy ny rivotra ary maimaimpoana i Frigg. Ny kirarony mavesatra no vesatry ny lasa. Rivotra iray antsoina hoe Wahuna mitsoka amin'ny volony. Sleipnir, soavaly valo tongotra, dia nandalo an'i Frigga. Frigga dia manintona, azo apetraka amin'ny soavaly mankany amin'ny andriamanitry ny rivotra ary mitazona mafy ary tsy misy pentimpentina tsy misy.
Ny milina fanamboarana dia vita amin'ny milina. Tsy mahatsapa na inona na inona ny milina iray, noho ny famoizam-po be dia be. Manao ny tanana rehetra izay fanaon'ny mpiasa maloto izy tamin'ny andro taloha. Ny fikarakarana tsy misy fahatsapana na fiainana, mekanika fotsiny, hetsika tsy misy dikany, tanjona tokana. Tsara ny mahafinaritra rehefa misy milina miasa ho antsika ny milina. Saingy ny namorona ny milina indray mandeha dia namboly hadalana. Hanohy manandoka anay avy any ivelany amin'ny alalàn'ny hadalany ny masinina. Hafa tsy mitovy ny sain'ny artifisialy, fa mijanona ho vendrana foana izy. Ny tenantsika ihany dia kôka fotsiny eo amin'ny milina lehibe eran-tany.
Niantso ny tanany ny tompony. Ireo atiny ao an-tanany dia tsy an'ny tompony. Ny ataon-tanany ihany dia mety amin'ny endriny ego amin'ny findramana ihany. Aorian'ny fahafatesan'ny tompony, ny atody teo an-tanany teo aloha dia mety amin'ny endrika hafa. Mahatsiaro ao an-tanany ilay tompony, mihetsiketsika eny an-tanany izy. Io fakany io no maha-izy azy. Tsy ny tanana izany.
Ny paoma adala
Mipetraka miaraka amin 'ny paoma ny paiso sy ny pulpa. Samy manambady ve izy ireo? Miorina bebe kokoa amin'ny paoma: ny havoana, ny maintso, ny voankazo, ny fihantonana ao amin'ilay hazo. Hoy ny paoma: 'Manana toetra aho, nefa tsy toetrako. Raha mijery ny tenako aho dia mahita fananana fa tsy misy. '' Tezitra ny manitra amin'io fahalalana io: '' Adala daholo! Tsy misy akory aho! '' Ny toetran'ny paoma rehetra dia mandeha amin'ny azy manokana. Mita ny avaratra, ny atsimo, atsimo. Ny avana any andrefana, ary ny paoma miantona atsinanana. Tsy paoma intsony izy io taloha io. Ny paoma dia nisaraka ny maha-izy azy sandoka.Vao avy natsipy avy tao amin'ny That Belongs To Me izy. Aiza ny freshness ny paoma? Mipetraka amin'ny pub izy ary mamela ny tenany hilatsaka!
Ny tononkalo dia midika hoe mampifandanja ny dikany ao aminy. Na izany aza dia fehezina indraindray ny tononkalin'ny mpanoratra ary tsy vitan'ny mpamaky intsony ny boaty dikany. Ny mpanoratra ihany no mahazo ny hevitry ny tononkalo raha mbola izy nanoratra. Ary na dia ho an'ny mpanoratra aza dia tery loatra ny volany amin'ny ampitso maraina.
Ny mangarahara dia manidina malalaka manodidina miharihary fa tsy mila hiafina. Ny vatolampy dia mangarahara indrindra. Na dia manana lanja aza ny mangarahara, dia tsy mora izany. Ny mangarahara dia mangarahara rehefa mihamalalaka.
Tonga hatrany ny fisamborana an-tsokosoko amin'ny finday ka mahomby. Noho izany, ny trondro dia lasa babo manokana. Manjavozavo izy ireo ary miaina anaty rano mifindra, saingy mbola mety ho tratra.
Ilaina ihany ny heloka bevava raha tsy tratra ianao. Tonga ny zoo ny gidro na dia tsy nanao ratsy aza izy. Ny zoo dia fonja mety amin'ny biby. Misy bibidia ny sasany voagadra ao amin'ny boribory. Mipetraka any amin'ny fonjan'ny fianaran'ny ray aman-dreniny ny ankizy. Ny vehivavy dia any am-ponja noho ny fiankinan-doha amin'ny vadiny.
Ny tsiambaratelo dia tsy tokony hahita ny mason'ny hafa. Mipetraka irery izy (na miaraka amin'ny mpiray tsikombakomba) ao anaty bunker ary mety manao amin'ireto manaraka ireto: mandoto izy io, faly miaro ny tenany, mandà izy na tsy manan-janaka. Ny tsiambaratelo: tsy fantatsika izay ataony. Izay mijanona ho tsiambaratelo.
Ny rivotra manidina tsy misy tongotra mamakivaky ny ranomasina midadasika. Rehefa manidina, ambony sy ambany no lalaovina mifanohitra. Ny vorona dia manan-kery nefa tsy manimba an'izao tontolo izao. Fahaiza-miaina izany. Tsy afaka manidina anefa ny toadstools, faingana ny elany. Ny elatry ny vorona dia mihanaka. Any an-trano ry zareo no. Ny elatra no sandan'ny sidina, natanjaka izy ireo. Ny vorona iray dia afaka manidina malalaka tsy misy fifandonana amin'ny saka amin'ny afovoany. Ny mpiasa iray kosa dia mifandona haingana amin'ny lehibeny na amin'ny fahamatorana eo amin'ny fiainana.
Ny hazavana dia manidina moramora amin'ny kirihitra piozila, mandalo lakolosaly matevina fotsiny izany. Ilay hazavana dia hita ho eny ambony. Mitsingevana eo ambony rano ny kitay satria maivana kokoa noho ny rano. Ny balaonina mafana manidina dia miala amin'ny tany amin'ny lanitra manga. Ny zavatra mora dia haingana lasa tsy misy dikany. Ity zavatra adala ity dia mitranga mora foana.
Nilatsaka tsara ny oram-panala. Mangina izy. Ny flake dia avy amin'ny tontolo hafa. Izy io dia manome firafitra an'ity tontolo ity, raha tsy izany dia hirodana daholo ny sehatry ny magnetika. Amin'ny tsipika avaratra sy atsimo dia milatsaka amin'ny ranomandry ny saha magnetika. Avy amin'ny tsato-bolan'ny tany dia mandamina fiovana miafina eto an-tany ny oram-panala. Ny magnetisma dia mitaona ny mponin'ny tany ka mahatonga azy ireo ho olom-pirenena mavesatra.
Ny fiarovana toy izany dia zavatra tsara. Ny fiarovana no zavatra voalohany ilainao: ny fiarovana ny lalàm-panorenana, fiarovana ny efitrano, pestisida, fiarovana data ary fiarovana ny eritreritra. Tsy mbola nitsidika ny fiarovana ny saina ianao? Ho avy izany, andraso ary hahita.
Fandevonana sy kapoka ary laoka. Ny mandevona dia mandenda tsara sy tsara kokoa mandra-pahatongan'ny sakafo hanina mba hidirana ao amin'ny hena. Na izany aza, ny sakafo foana dia somary manapoizina. Manapoizina ny tany. Tsy an-tranonay izany. Ny biby dia afaka mandevona tsara lavitra noho ny olombelona, ​​fa miaina akaiky kokoa ny tany izy ireo.
Izay ijoroantsika dia antsoina hoe tany. Indraindray koa no antsoina hoe tany. Mitsangana ary miorina mafy ny tany. Ny tany koa dia mety midika hoe humus na vato. Ny tena mahavariana indrindra eto an-tany dia ny potika, masiaka kosa ary mavesatra. Milamina ny tany, kitoatoa ny tany. Ilay reny lehibe lehibe dia tsy manana tarehy. Mahavelona ve izy? Tonga hatrany amin'ny tany ny faka, mahalala ihany koa ny tany. Ny faka dia iray amin'ny sisa amin'ny tany.
Ny tantely dia mivelona ao anaty faritra matevina, anatiny. Ny tantely mandeha any ivelany izay hatsiaka. Nianjera tamin'ny tany toy ny oram-panala. Namoaka ny atiny ho toy ny flakes mangatsiaka ny tantely. Raha mbola mihamangatsiaka ny oram-panala, dia fotoanan'ny hazo izy. Raha miboridana ny tara, dia miboridana ny fanirery. Amin'ny famafazana ny sakam-borona dia mampifandray ny faritra rehetra eto an-tany ny tantely ary manamafy ny fahabetsahana, mampitsiky ny herin'ny gravité izy ireo. Ny nectar dia boky mbola tsy novakiana. Tsy avy amin'ny mpanoratra azy ihany koa.
Ny fahatratrarana dia mazàna amin'ny habetsahany. Raha tàkana kosa dia kely ny gravité. Mihamatanjaka ny faharatsiana. Misy fiantraikany amin'ny alàlan'ny fitambarany, tsy amin'ny alàlan'ny lokony, satria ny maizina dia maizina ary maro loko. Ny fahasarotana dia tsy mahazo izay mahatsikaiky. Mahatsiaro mahatsikaiky sy mavesatra miaraka afa-tsy amin'ny siramamy ihany. Avy any ambony na ambany ve ny gravitation? Rehefa lasa mafy ny hafanana dia lasa gravite. Ahoana ny amin'ny vato tsy afaka mihodina? Mavesatra loatra sa mavesatra loatra? Nahery setra koa izy! Malemy noho ny lozabe. Mafy ve avy eo? Mitovy amin'izany!
Rivotra ny rivotra noho ny hazo sy ny trano. Tsy hita ny herin 'ny rivotra, fa ny fiatraikany ihany no hita. Rivotra ny rivotra misy. Ny dandelion mitsoka rivotra, ary toy izany koa ny lavenona. Mitsoka mafy ny rivotra. Saingy tena mitsoka fotsiny izany.
Voagejan-doha ao amin'ny atidoha
Ny fananana dia tokana. Anisany izy. Ny habe dia havana, fa isaky ny ampitahaina izany. Tsy nanana tompony i Lota. Isolde dia manana kibo be, saingy tsy azy ny tavy. Ny zava-drehetra manana befluous dia be. Tsy maninona na firy ny vaky maka ny atidohan'i Einstein. Izany dia fananana ny ati-doha mahatonga azy ho tompona azy fa tsy ny isan'ny cracks. Tsy azonao atao ny mampitaha paoma sy voanjo, ny lanjan'izy ireo ihany.
Ny fitrandrahana vato dia antsoina hoe fasika. Kely loatra ny mpanodinkodina amin'ny fasika ka mamorona vondrona iray indray ho vondron'olona mitokana. Ny fasika avy eo dia tsapa amin'ny fitambarany. Mampatahotra ny zavatra rehetra, saingy tsy afaka mitomany ny fasika satria maina be ny andro. Ny vato tsy manana ra na rano, na dia tahaka ny fasika aza. Ny ranomason'ny goavambe dia manome rano sira toy ny ranomasina. Izany no mahatonga ny fasika matetika matetika hita amoron-dranomasina misy ranomasina.
Ny olona dia tsy misy afa-tsy ao amin'ny plural. Ny olona iray dia tsy afaka mitokana irery. Ny olombelona toy ny biby fiompy dia lasa '' olona ''. Vahoaka marobe ny olona. Ny ran'ny olona dia ny ran'ny havany. Ny olona iray, etsy andaniny, dia manana ny lalan-drà ao aminy. Raha ny avy amin'ny Jiosy taloha, ny ran'i Abrahama dia nidina hatramin'ny farany. Ny olona sy ny olona archaic dia manana ny maha izy azy azy ireo ao amin'ilay vondrona, fa tsy ao anatiny.
Babylona dia tsy zazakely: lehibe noho ny lehibe indrindra. Misy koa mpitsikilo ao New York. Fa ireo kosa dia tsy maintsy naringan'ny mpampihorohoro satria te hanakorontana an'Andriamanitra. Izy ireo dia mandihy momba ny zanak'omby volamena, ny fitomboana ara-toekarena sy ny mpandidy kosmetika. Rahoviana no ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra ary handroaka ny olona mpanota ao anaty fako?
singa bitika kely
Nahazo fidirana tsy nahazo alalana tamin'ny fangatahana goavambe lehibe tany akaikin'i Geneva i Fred ary alina dia niditra tao anaty peratra boribory izy.
Fred: Salama singa afaka miteny ve ianao?
Zato maintso: voan'ny aretin'andoha, ratsy izany satria ao anaty loha ihany aho. Hatramin'ny nahitan'ny fizika ahy dia tsy afaka mihary an'izao tontolo izao intsony aho. Na ny politika aza dia tsy voafehy intsony.
Nisy sola mena iray nandalo: Nisavoana ny lelan'i Fred, izay somary mena noho ny sombiny ihany.
sola mena: Izaho dia mandrehitra afo eo ambanin'ny ampela vola. Ny vola dia fampahalalana fotsiny. Ny lelako dia manome lanja ny vaovao. Ny fehezanteny iray dia manidina, misy eo amin'ny handriny.
Triangle: Izaho dia ampahany lehibe indrindra misy. Tsy misy afa-tsy singa tsy hita ao amin'ny helo fizika. Ny kely dia tsy misy zava-misy. Ny zavatra midadasika dia mahazo, miharihary ny tena maha izy azy. - Gaga fotsiny i Fred.
Ny korontana dia fisafotofotoana ampiasain'ny olon-kafa an-tsokosoko hidirana an'izao tontolo izao tsy voailika amin'ny fiarovana ny saina. Mivadika ny korontana. Manala ny fako taloha ny korontana. Nandihy ny korontana ary tsy mahalala izay.
Amin'ny fanoratana dia miteny am-pahanginana ny fitenin'ny fiteny, saingy marefo amin'ny fisainana. Ny mpanoratra dia ny mpanao sokitra azo antoka. Ny asa soratra dia zavatra voasoratra foana na dia eo am-panoratana aza. Ny voasoratra dia farany ary maharitra noho ny divay tsara. Ny teny dia manoratra mandritra ny fotoana rehetra.
Ny dihy dia sahy. Izay mandihy dia adala. Fa ny dihy dia mety ho mangatsiaka rehefa tsy mankarary ianao. Tsy tokony handihy ny mpandinika. Ny dihy dia manimba ny toe-tsaina. Faniriana noho ny tsy fisian'ny fitiavana fitiavana, ny hatezerana toy ny tigra mihinana ny filan'ny faharatsiana: Ny pussies mamy dia mamorona pussies!
Latsaka avy tany an-danitra ny loon-dranomaso. Miangona eto an-tany izy ireo mba hamorona renirano iray izay miboiboika ao anaty ony. Mipetraka lakana anaty rano i Erwin amin'ny alàlan-dranomaso. Ny renirano mikoriana. Afo mirehitra eo amoron'ny ony ny renirano ho fanajana an'i Wotan. Amin'ny ankavia ankavia dia hazo misy vorona vato mipetraka eo. Mbola manohy tohatra lakana i Erwin. Mangatsiatsiaka izao. Ny mpanjono dia nahita ranomandry ny lakana teny amoron-tevana teo anelanelan'ny fanjaitra hazo kesika. Mbola velona ihany ny mason'ilay ranomandry, mason'izy ireo ny mason'ireo orsa. Mbola manohy ny rano hatrany i Erwin. Eo ankavia, misy olona mitendry harpa. Akaiky Andriamanitra.
Vehivavy mainty manana miloko loko no misotro amin'ny hatsiaka. Mifanipaka izy ireo miaraka amin'ireo kintana, eo ambanin'ny kintana, eo anelanelan'ny kintana. Mivoitra ny fiainan'ny Titanic amin'ny filentehany. Rambo taratasy miforitra milentika mitsonika anaty rano ao anaty rano, mikononoka tsara mankany amin'ny loharano misy lemaka: Bang! Latsaka avy any ambony ny savoka. Tapitra farany i Eyjafjallajökull.
Mifanohitra amin'ny mifanohitra amin'izany ny fitiavana. Toy ny mifandraika amin'izany, ny fampifamenoana dia mifameno amin'ny iray hafa. Mifanaraka amina rafitra iray ny zava-drehetra. Eo amin'ny latabatra an-dakozia Andriamatoa Alki ny sigara, sigara sy lavenona. Mety mitombina izany, mifanaraka amin'izany. Ny latabatr'i Mr. Alki dia fandrafitra. Amin'ny Internet, Hinz sy Kunz dia miara-miasa ao amin'ny katalaogy lehibe. Hinz sy Kunz dia tsy mifandray afa-tsy amin'ny fisiany. Tsy lamba ny Internet, fa tsy misy dikany.
Malemy ny zavatra iray rehefa eo izy; tsy izany intsony. Ny zavatra tsy mizaha tavan'olona. Ny masin'izao tontolo izao tsy misy ilàna azy no mibaiko ny tany: Internet of Things. Ireo zavatra miangona mamolavola izao tontolo izao. Efa ela i Satana dia nanana an'izao tontolo izao tao amin'ny valanoranony. Raha ny zava-manan'aina dia tsy miresaka zavatra ny olona satria mamindra ny tenany izy ireo. Saingy ny zavatra kely iray dia afaka mihetsika irery. Izany dia zavatra iray.
Ny fepetra azo atao dia ny mety, ary nofidin'ny andriamanitra be fitiavana. Amin'ny maha mpampianatra azy, ny fetran'ny marary dia mametra ny fetrany tsy misy hery manoloana ny oron'ny mpianatra. Ho an'ny mpianatra dia feno ny fepetra, mitombo ny fiainany, ary mety hamokatra herinaratra amin'ny tohodrano ny indostria.
Izany rehetra izany dia fanampin-javatra maro ho an'ny fetra tsy misy. Efa daholo ve izany? Farafaharatsiny farafaharatsiny boribory daholo. Araka ny efa nampoizina dia tokony hamirapiratra eo amin'ny sisiny ny zavatra rehetra, saingy eo foana no misy volo eo. Avy eo, ilay pretra indostrialy dia niteny hoe: "Ny ambiny dia mihoatra noho ny ampahany aminy!" Na dia aorian'io fehezanteny io aza dia tsy mamirapiratra ny zava-drehetra ary tsy hita intsony. Ny fitambaran'izany rehetra izany dia tsy misy afa-tsy ny fanampian'ny zavatra rehetra. Mbola betsaka ihany ny boky amin'ity boky ity.
Tsy misy na inona na inona ny tontolon'ny zavatra tsy misy. Ny kaopy dia tsy seza. Akanjo iray tsy rahona. Tsy voatery hiresaka ny alika: ny alika dia tsy saka fotsiny toy ny tsikirity. Ny zavatra tsy zavatra rehetra dia miangona ao anatin'ny tontolon'ny tsy misy. Misy ny milaza fa tsy misy na inona na inona aorian'ny fahafatesany. Te-hiaina eo tsy misy afa-tsy ny tsy manjary ianao? Ho tsara tarehy izy io ao amin'ny efitrano fitahirizana na inona na inona.
Mila fahafinaretana mihoatra izay ilaina. Ny fifaliana dia mifandray amin'ny fahasambarana. Saingy na dia fahasambarana ho fanomezana fiainana aza ny fahasambarana, dia mahazo tombony tokoa ny fifaliana. Mijanona sy mijanona mahafinaritra Mahafinaritra ny fahafinaretana matotra ny fahafinaretana. Ny fahafaham-po dia fahafinaretana efa nihoatra. Tsy mieritreritra ny fahafinaretana, miadana ny fifaliana ho an'izany. Raha mitroka mihoatra noho izay ilaina ny tsinay, dia faly. Mamy ny fahafaham-po, fa ny siramamy kosa dia fahasambarana.